Chineke ma ihe karịa anyị n’ihi na ọ bụ ya kere anyị. Ọ hụrụ anyị n’anya, ihe banyere anyị na-emetụkwa ya n’obi. Ihe ọzọ bụ na o nweghị mgbe ọ chọrọ ka anyị na-eduzi onwe anyị. (Jeremaya 10:23) Anyị kwesịrị ịgakwuru ya ka o duzie anyị otú ahụ nwata kwesịrị ịgakwuru nna ya na nne ya ka ha duzie ya. (Aịzaya 48:17, 18) Ọ bụ Chineke nyere iwu ndị dị na Baịbụl, o jikwa ha na-eduzi anyị.​—Gụọ 2 Timoti 3:16.
Jehova ji iwu niile o nyere anyị na-akụziri anyị otú ka mma anyị ga-esi na-ebi ndụ ugbu a. Ha na-akụzikwara anyị ihe anyị ga-eme ka anyị nweta ndụ ebighị ebi. Ebe ọ bụ Chineke kere anyị, anyị kwesịrị irubere ya isi.​—Gụọ Abụ Ọma 19:7, 11; Mkpughe 4:11.
Na Baịbụl, o nwere ebe ụfọdụ Chineke nyere iwu, kwuo hoo haa ihe anyị ga-eme. (Diuterọnọmi 22:8) E nwekwara ihe ụfọdụ Chineke kwuru bụ́ ndị ga-enyere anyị aka ịma ihe ọ chọrọ ka anyị mee. Ọ bụzi anyịnwa ga-eji ikike iche echiche anyị mara ihe anyị kwesịrị ime dabere n’ihe ahụ o kwuru. (Ilu 2:10-12) Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru na ndụ bụ onyinye Chineke nyere anyị. Ọ bụrụ na anyị echeta ihe a o kwuru, ọ ga-eme ka anyị ghara ime ihe ọ bụla ga-emerụ ma anyịnwa ma ndị ọzọ ahụ́.​—Gụọ Ọrụ Ndịozi 17:28.
Jizọs kwuru iwu abụọ kacha mkpa. Nke mbụ mere ka anyị ghọta ihe mere e ji kee ụmụ mmadụ. E kere anyị ka anyị mara Chineke, hụ ya n’anya ma na-ejere ya ozi mgbe niile. Anyị kwesịrị iburu iwu mbụ a n’uche mgbe ọ bụla anyị na-eme mkpebi. (Ilu 3:6) Ọ bụrụ na mmadụ ana-erube isi n’iwu ahụ, ya na Chineke ga-adị ná mma, ọ ga-enwekwa ezigbo obi ụtọ. Onye ahụ ga-enwetakwa ndụ ebighị ebi.​—Gụọ Matiu 22:36-38.
Iwu nke abụọ Jizọs kwuru nwere ike inyere anyị aka ka anyị na ndị ọzọ na-adị ná mma. (1 Ndị Kọrịnt 13:4-7) Ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ihe e kwuru n’iwu ahụ, anyị ga na-emeso ndị ọzọ ihe otú Chineke si emeso ha.​—Gụọ Matiu 7:12; 22:39, 40.
Iwu Chineke na-akụziri ezinụlọ otú ha ga-esi na-ahụ ibe ha n’anya ma na-emekọ ihe ọnụ. (Ndị Kọlọsi 3:12-14) Okwu Chineke na-emekwa ka ezinụlọ dịrị n’otu. O kwuru na di ekwesịghị ịhapụ nwunye ya, nwaanyị ekwesịghịkwa ịhapụ di ya.​—Gụọ Jenesis 2:24.
Ọ bụrụ na anyị ana-eme ihe Baịbụl kwuru, ọ ga-esi ike achụọ anyị n’ọrụ, anyị ga na-enwekwa obi ụtọ. Dị ka ihe atụ, ndị mmadụ na-achọkarị ka ndị na-ekwu eziokwu na ndị na-arụsi ọrụ ike na-arụrụ ha ọrụ. Ị manụ na ikwu eziokwu na ịrụsi ọrụ ike so n’iwu ndị e nyere na Baịbụl. (Ilu 10:4, 26; Ndị Hibru 13:18) Okwu Chineke gwakwara anyị ka afọ ju anyị n’ihe anyị nwere. O kwukwara na mkpa anyị kwesịrị ịbụ otú anyị na Chineke ga-esi dịrị ná mma, ọ bụghị otú anyị ga-esi akpakọba akụnụba.​—Gụọ Matiu 6:24, 25, 33; 1 Timoti 6:8-10.
Anyị mee ihe Chineke nyere n’iwu, anyị agaghị na-arịakarị ọrịa. (Ilu 14:30; 22:24, 25) Dị ka ihe atụ, Chineke nyere anyị iwu ka anyị ghara ịṅụ oké mmanya. Ọ bụrụ na anyị egee ntị n’iwu a, anyị agaghị na-arịa ọrịa ma ọ bụkwanụ na-enwe ihe mberede ịṅụ oké mmanya na-akpata. (Ilu 23:20) Jehova asịghị anyị aṅụla mmanya, kama, ọ sị anyị aṅụbigala ya ókè. (Abụ Ọma 104:15; 1 Ndị Kọrịnt 6:10) Chineke nyere anyị iwu ka anyị kpachara anya n’otú anyị si akpa àgwà nakwa n’ihe anyị na-eche n’echiche. Iwu ndị ahụ o nyere anyị na-abakwara anyị uru. (Abụ Ọma 119:97-100) Ma, isi ihe mere ezigbo Ndị Kraịst ji edebe iwu Chineke abụghị naanị ka ọ baara ha uru, kamakwa ka ha wetara Jehova otuto.​—Gụọ Matiu 5:14-16.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Otú Iwu Chineke Si Abara Anyị Uru?
fg ihe ọmụmụ 11 p. 22-23